२३ वर्षे युवतीको यो अवस्था भयो ‘जिरो फिगर’ बनाउन खोज्दा (भिडीयो हेर्नुहोस) – live 60media
← श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले पढ्नुपर्ने ! पूरा हेर्नुहोस
“जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित हेर्नुहोस्” →